Iindaba ezilungileyo: Kulula kakhulu kunokufumana amathikithi eMasters
Ngoko ufuna ukuya eUnited States Open. Kunzima kangakanani ukufumana amathikithi e-golf e- US Open ?
Mhlawumbi kungekho nzima njengoko unokucinga. Ngokuqinisekileyo akunakunzima (okanye ixabiso) njengoko, uthi, ukufumana amathikiti eMasters .
"I-US Vula iikiti zegalufu ze-golf zilula ukuzenza," kusho uBrian Talbot weThikCo Premium Seating. "Enyanisweni, enye yezona ziganeko ezinkulu ze-US ukungena, nangona ulahlekelwe ithuba lokufumana ithikithi ngebhokisi leofisi.
Amathikithi awancinci kwimarike yesibini. "
Ixabiso alikho kummandla ofanayo kunye netikiti zeMasters, amathikiti e- Super Bowl okanye iiTyiti zeeHlabathi zeSizwe, ukubiza ezimbalwa, kwiimarike zesekondari (ezithetha ithikithi ezithengiswa ngabadayisi okanye ngabanye).
Kulungile, kukho ithuba elifanelekileyo lokuba awuyi kuba neemarike zesekondari ukufumana amathikiti akho e-golf e-US Open.
Amatekisi e-US Open Golf kwi-Box Office
I-USGA isetyenziselwa ukuqhuba i-lottery ukunikezela ithikithi kwi-US Open, kuqala kumalungu e-USGA, kwaye kamva enye i-lottery kuluntu jikelele. Kodwa le mihla, i-US Open tikiti zingathengwa ngokuthe ngqo kwi-intanethi ngokukodwa kwi-USGA, akukho nelottery efunekayo.
Amalungu e-USGA asafumana isaziso sangaphambili kunye nethuba lokuthenga amathikithi. Ngoko ukuba ufuna ukuqinisekisile ngokwakho ithikithi, ube ilungu le-USGA.
Amathikithi ngokubanzi athengiswa kumalungu e-USGA malunga neenyanga ezili-15 ngaphambi komhla we-US Open, kunye noluntu jikelele lufumana ithuba lokuqala inyanga eziliqela emva koko.
Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba amathikithi athengisa kwangaphambili.
Ngo-2014, umzekelo, i-US Open idlalwe kwi- Pinehurst Resort kwiNorth Carolina, ukuqala ngoJuni 12. Ngomhla wama-20 kaMeyi waloo nyaka - iiveki ezimbalwa ngaphambi kokuqala komdlalo - Sihlolisise iphepha letikiti kwi-usga.org kwaye wathola amathikithi ayenayo yonke imihla yokusebenza kunye nazo zonke iintsuku zemiqhubi.
Ukusebenzisa amathikithi emini bebethengisa i-$ 60; Iikitikiti zokuqala kunye neyesibini zedola ezili-120 (ngosuku); kwaye ithikithi yesithathu neyesine yee-135 zamaRandi. (Ukuhlaziywa ukuqaphela ukuba ekupheleni kosuku, amathikithi eMgqibelo ayethengisile.)
Ngoko ukuba ufuna ukuya kwi-US Open, ukufumana amathikiti ngqo kwi-USGA kulula, ngokukhawuleza ukuba ukhangele kwangangoko.
Kuphi ukuhlola? Yiya kwikhasikiti yamatiti kwi-usga.org uze ukhangele okukhethwa kukho. Yaye khumbula oko sathetha ngaphambili: Ukuba ilungu le-USGA yindlela efanelekileyo yokuhamba xa kuziwa ukufumana ithikithi. Ngo-2017, ubulungu be-USGA buqaliswe ngaphantsi kwe-$ 10. Khangela ikhonkco "Ubulungu" kwisiqalo sasekhaya sase-usga.org.
Iikititi ze-US Open Golf kwiMarike yesiThili
Ukuba ulinde ixesha elide kwaye amathikithi ngqo esuka kwi-USGA athengiswayo, umthengisi onetyala elifanelekileyo liyinto elandelayo efanelekileyo. Njengoko iTalbot ibonakalise ekuqaleni, iiTyiti ze-golf ezivulekileyo ze-golf ziyingqikithi engabizi kakhulu phakathi kwezemidlalo ezinkulu ze-US.
Kwaye nantsi ingongoma engaphakathi evela kuTalbot: Ukuba yenza iikitikiti ezijikelezayo ozifunayo, ingenokuba yinto eshibhekile ukuqala ngokuthenga abathengi betekethi abathengileyo kunokuba bathenge ngqo kwi-USGA. Ngamanye ama-brokers athengisa amathikiti ajikeleze ngezantsi.
(Ngokucacileyo, thelekisa amanani ngaphambi kokugqiba apho ungathenga khona.)
Ezinye izingosi zenye indawo, nangona ithikithi idla ngokuthengisa i-premium kwiindawo ezinjalo. Kodwa ukuba uyifumana intengo yokuthengiswa kwintengiso, qiniseka ukuba uthenge kuphela kubadayisi abanokulinganisa okuphezulu.
I-scalping ye-site iyahlukahluka kunyaka-nonyaka kuxhomekeka kwindlela esi siza ngayo isayithi. Mhlawumbi unganakulindela ukufumana ithikithi ngosuku lwesiganeko (kwaye ke kukho yonke into ephula umthetho-mthetho ukucinga ngawo ...).
Ngoko ke, ukucaphula ...
I-US Vula iikiti zegolfu ziphakathi kweetyitile ezilula kunye (ezihambelanayo) ezincinci ukufumana imicimbi emikhulu yezemidlalo yaseMelika.
Ukuba uceba ngokukhawuleza, kufuneka ufumane amathikiti ngokuthe ngqo kwi-USGA (kwaye unokuqinisekisa ngokwakho ithikithi ngokuba ilungu le-USGA).
Kodwa abathengi abathengisa ithikithi banokukhethwa okulungileyo-kwaye ngamanye amaxesha inketho yokuqala xa kufikelelwe kwiikitikiti ezijikelezayo.
I-PGA Tour Wells Championship Championship
I-Amateur yase-US Junior, i-Youth Golf Championship enkulu
I-LPGA ye-Royalmill Championship Golf Tournament
Ngubani owayengumNumzane waseMelika ozelwe ngowama-US Open?
Ukusebenzisa nokuKwahlula phakathi kweeNgxelo eziLawuliweyo kunye neeNkcazo ezingekho ngqo
Yiyiphi i-Theological Negative in Christianity?
IiNkqubo zeNzululwazi ezinkulu zeSikolo zeBanga labaPhakamileyo beZikolo
Abantu baseMerika Revolution
Funda nge-Mesencephalon (Midbrain) Umsebenzi kunye neZakhiwo
Izizathu zokuthi imithi ephilayo ixabiseke
Uncedo, uNdodakazikazi waseNorth of Underworld